Momba anay - Momba ny Propars E-Export
Propars dia rindrambaiko e-fanondranana eran-tany manana foibe any Tiorkia izay mamokatra vahaolana e-varotra matihanina ho an'ny orinasa.
Niorina tamin'ny 2013 tao anatin'ny vatan'ny Istanbul University Technopolis, Propars dia nandray anjara tamin'ny fizotry ny fanovana nomerika amin'ny orinasa an'arivony. Na dia namela ny orinasa hitantana ny filany ara-teknika rehetra amin'ny e-varotra aza izy dia niasa ho mpanome tolotra ofisialy e-invoice/e-archive ihany koa izy.
Miaraka amin'ny fampidirana Ebay.com vita tamin'ny 2016, ny anarana ofisialy voalohany dia noraisina tamin'ny sehatry ny e-export. Ny fahafantarana ny fampidirana Amazon.com tamin'ny taona 2017, ny Propars dia nofantenana ho Tetikasa Pilot nataon'i Türk Telekom tamin'io taona io ihany.
Tamin'ny taona 2019, dia tafiditra tao amin'ny firenena 26 ihany koa izy, anisan'izany i Amazon sy Ebay, ary niditra tao amin'ny lisitry ny Amazon SPN tamin'ny 2020. Propars, lozisialy voalohany sady tokana ao Tiorkia izay manome fidirana feno amin'ny tsena manerantany, dia manampy tsena an-tserasera vaovao isan'andro amin'ny portfolio-ny. Izy io dia manitatra bebe kokoa ny tambajotra varotra atolony ho an'ireo mpampiasa azy miaraka amin'ireo tsena manerantany sy eo an-toerana.
Ny orinasa any Torkia mampiasa Propars dia efa nandefa baiko an-tapitrisany tany amin'ny firenena 20 tamin'ny alàlan'ny tsena manerantany 107 mahery. Noho ny firafitry ny rindrambaiko manerantany sy mandroso dia nanomboka nifidy Propars ihany koa ireo mpivarotra eoropeana sy amerikana.
Mamela ny orinasa rehetra hivarotra amin'izao tontolo izao amin'ny fampiasana ny fitenin-drazany fotsiny, ny Propars dia mahafeno ny fepetra ara-teknika rehetra ilaina amin'ny e-varotra avy amin'ny tontonana tokana ary misongadina amin'ny tsena manerantany.
Noraisin'ny Propars ny foto-kevitry ny digitalization ny SMEs ary ny fanokafana azy ireo amin'izao tontolo izao. Nanasa ireo SME mba hanao e-export sy hanome lanja fanampiny ho an’ny toekaren’ny firenena, miaraka amin’ny fiofanana e-varotra/e-export an-jatony natolony maimaimpoana hatramin’izao.
Mihabetsaka hatrany ny SME isan'andro, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-barotra sarobidy, indrindra ireo banky lehibe ao Tiorkia.
Inona no ao amin'ny Propars?
Ny orinasa mampiasa Propars dia afaka mamaly ny filany rehetra amin'ny e-varotra sy ny e-fanondranana amin'ny toerana iray. Ny endri-javatra lehibe azonao idirana ao amin'ny Propars dia ireto manaraka ireto;
Fitantanana tsena mora miaraka amin'ny varotra batch,
Fahafahana mitantana ny tsena rehetra amin'ny efijery iray ihany,
Fanaraha-maso ny tahiry mandeha ho azy,
Pejy fitantanana kaomandy sy serivisy e-invoice/e-archive
Serivisy fandikan-teny mandeha ho azy
Fahafahana miditra amin'ny fampielezan-kevitry ny mpiara-miasa.